Lithuania in ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo ku saabsan xudduudaha Belarusiya ee ku wajahan soogalootiga sharci darrada ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Lithuania Breaking News » Lithuania in ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo ku saabsan xudduudaha Belarusiya ee ku wajahan soogalootiga sharci darrada ah
Belarus Jebinta Wararka • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • Lithuania Breaking News • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Lithuania in ay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah oo ku saabsan xudduudaha Belarusiya ee ku wajahan soogalootiga sharci darrada ah.
Sida nidaamka hadda jira, xaalad degdeg ah waxaa ku dhawaaqi kara Seimas (baarlamaanka) codsiga dowladda.
Nidaamka Xaaladda Degdegga ah waxaa la soo jeediyay in lagu dhawaaqo ugu yaraan hal bil.
Tiro badan oo muhaajiriin sharci darro ah ayaa hagaya oo ay maamulaan maamulka Belarusiya oo isku dayaya inay u gudbaan Lithuania.
Wadamada Midowga Yurub ayaa ku eedeeyay Minsk in ay si ula kac ah u kordhiyeen dhibaatada waxayna ku baaqayaan cunaqabatayn dheeri ah oo ka dhan ah Belarus.
Dowladda Lithuania, ayaa kullankii maanta, ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah lagu soo rogay gobollada ay deriska yihiin ee Belarus, taas oo ay ugu wacan tahay daadad muhaajiriin sharci-darro ah, oo ay hagayeen oo ay kaalmeeyeen. Belarusiyan mas'uuliyiinta, isku dayaya inay si sharci darro ah uga gudbaan xadka EU Gobolka Baltic
"Go'aanka waxaa la sameeyay iyadoo la tix-gelinayo xaaladda ka sii daraysa ee gobolka xadka, waxaan u gudbinaynaa ansixinta baarlamaanka," Ra'iisul Wasaare Ingrida Simonyte ayaa tiri. Sida nidaamka hadda jira, xaalad degdeg ah waxaa ku dhawaaqi kara Seimas (baarlamaanka) codsiga dowladda.
Sida ku cad soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha, xaaladda degdegga ah waxay dhaqan gelaysaa saqda dhexe ee 10-ka bisha November ee soo socota deegaanka xuduudka iyo meel 5 KM u jirta iyo sidoo kale goobaha ay ku nool yihiin dadka tahriibayaasha ah ee ka imaanaya dalalka Afrika iyo Aasiya. waxa uu galay Lithuania isaga oo sii maray Belarus.
Dhanka kale, Belarus Kaligii-taliye Alexander Lukashenko ayaa Talaadadii sheegay in uu u malaynayo in dhawaan laga filayo muhaajiriin badan oo ka imaanaya Afgaanistaan.
Sida uu sheegay Lukashenko, muhaajiriin ka yimid Afgaanistaan ​​ayaa gaaray Belarus iyada oo la sii marayo jamhuuriyada Aasiyada dhexe iyo iyada oo la sii marayo Ruushka.
Muhaajiriinta sharci-darrada ah iyaga ayaa isla markiiba hagaya oo mararka qaarkood la galbiyay Masuuliyiinta Belarus ilaa xuduudaha Polish iyo Lithuania.
Midowga Yurub dalalku waxay ku eedeeyeen Minsk in ay si ula kac ah u kordhiso dhibaatada waxayna ku baaqayaan cunaqabatayn dheeri ah oo ka dhan ah Belarus.
Xaaladda xudduudda Poland iyo Belarus ayaa aad uga sii dartay Isniintii, markii dhowr kun oo muhaajiriin ah ay ku soo dhawaadeen xadka Poland. Qaar ka mid ah ayaa isku dayay in ay jabiyaan dayrkii siliga ahaa oo ay jabiyeen Poland. Ciidamada booliiska Poland ayaa isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u joojiyaan muhaajiriinta.